स्वीकृति क्रेडिट के मतलब छ? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा
सुरु ऋण wiki Akzeptkredit
स्वीकृति ऋण के हो?
der Akzeptkredit वित्त को एक दुर्लभ रूप बन्यो, र यसैले यस ऋण देखि तपाईंलाई थाहा छ।
स्वीकृति ऋण विदेशी व्यापार मा विशेष रूप देखि आर्थिक रूप देखि गहन आयात लेनदेन मा निवेश को वित्तपोषण को लागि प्रयोग गरिन्छ। तपाईं एक निजी ग्राहक रूपमा शायद परिवर्तनहरू जडानमा वित्त यस दुर्लभ फारम को सुनेका र तपाईं वित्त यस दुर्लभ फारम बारेमा सुझाव गर्न चाहनुहुन्छ भने शब्द Bankakzept थाहा छ। एक को लागी स्वीकृति क्रेडिट को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ?
यो प्रश्न मात्र स्पष्ट रूपमा जवाफ दिइएको छ, किनकी विभिन्न प्रकारका फाइनान्सिङ्हरू, देनदारहरूको भुक्तानको रूपमा यो उत्पादन गरिएको छ। यो विदेशी व्यापारको सामानको अन्तराष्ट्रिय वित्तपोषणको बारेमा हो। यो स्वीकृति ऋण को वित्त पोषण को विनिमय को बिल को उपयोग को कारण कम महत्वपूर्ण छ। विदेशी भुक्तानीहरूमा बढी र अधिक बाधाहरू घटेका छन् र यस ऋणको बैंकिंग व्यवसायमा अधीनस्थ विकासलाई व्याख्या गर्न सकिन्छ।
विदेशमा व्यापार जीवनमा तरलता प्राप्त गर्नुहोस्
जर्मनीमा आयात र निर्यात एक धेरै महत्त्वपूर्ण आर्थिक भूमिका खेल्दछ। विदेशी व्यापारको सामानको प्रवाह आज वैश्वीकरण मार्फत धेरै बलियो हुन्छ र सामानको यी प्रवाह बिना कुनै कम्पनीले गर्न सक्दैन। तथापि, स्वीकृति क्रेडिट प्रयोगमा अस्वीकार गरिएको छ, किनकी आजको अभ्यास छूटले यसको अस्तित्व र प्रयोगमा स्वीकृति क्रेडिट विस्थापित गरेको छ। यो क्रेडिट पनि भनिन्छ स्वीकृति क्रेडिटकिनकि उपयुक्त बैंकले यो ऋणलाई सम्बन्धित बिलको छुटकाराको लागि जिम्मेवार प्रदान गर्दछ। विनिमयको बिल आज भुक्तानीको असामान्य माध्यम बनेको छ। कम्पनीहरू विगतका खरिदहरू बिलहरूमा विरूद्ध छन् र यी बिलहरूलाई क्रेडिट सहित सुरक्षित राख्छन्। यसले अर्थ बुझाउँछ र आज अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा र सिधा भुक्तानी गर्दछ। भुक्तानी विकल्प र अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता मुद्राहरू को विभिन्न प्रकारका सर्तहरू को सरलता, साथै यूरो को परिचय मा, त्यहाँ EU मा भुक्तानी सुधार भएको छ कि एक विकास भएको छ। आज, कुनै परिवर्तन आपूर्ति श्रृंखला को अन्त मा माल पनि भुक्तानी निश्चित गर्न प्रयोग गरिन्छ। धेरै कारणहरूले यो स्वीकृति क्रेडिटको बारेमा बोल्छन्। को Akzeptkredit Kreditleihe, यहाँ कुनै परिपक्वताहरुलाई नै सहमत छन् को कोटीमा पर्छ, तर देय टिप्पणीहरू बैंक ऋणबाट शुल्क रूपमा घोषणा भएको एक क्रेडिट ग्यारेन्टी हो।
परम्परा संग बैंक स्वीकृति एक अवधारणा
यो ऋण समयबाट उत्पन्न हुन्छ जब आयात र निर्यात लेनदेन विनिमय को बिल को बिरुद्ध बनाइयो। विनिमय को बिल आर्थिक रूप मा नकदी र नकदी को रूप मा देख्यो। राज्यले विनिमयको बिलको विनिमयदरको बिललाई पनि माग गर्दछ र यस प्रकारको आजको पसलहरू रेटिङमा बसाइन्छन्। यो पनि धेरै जटिल लग रहेको छ, किनभने वास्तवमा स्वीकार्य क्रेडिट उधार लिन आवश्यक धेरै कदमहरू छन्। स्वीकृति क्रेडिट अझै पनि प्रयोग गरिएको छ, यसको कार्य र यसको प्रयोग को वर्णन गरिएको छ। राज्यहरू जो व्यापार संघमा व्यवस्थित हुँदैनन् प्राय: भुक्तान प्रक्रियामा समस्याहरू छन्। विदेशी व्यापारले विनिमयको बिल सुरक्षित गर्न यस प्रकारको ऋणको प्रयोग गर्दछ र बैंकहरूले सर्त ऋणको माध्यमबाट पैसाको भुक्तानीबारे ग्यारेन्टी दिन्छ। यो सँधै पैसा विरुद्ध सामानको बारेमा हो र सम्पूर्ण प्रक्रिया मात्र विदेशी व्यापारमा हुन्छ। विनिमयको बिलहरू हालै नै मागमा छन् र त्यसो त यो ऋण भुक्तान लेनदेनको मात्र महत्त्वपूर्ण छ। आज, धेरै धेरै सजिलो छ र धेरै कम्पनीहरूले सामान र सामानको लागि तिर्न अन्य तरिका प्रयोग गर्दछ। तथापि, यस प्रकार को लगानी वित्त को सैद्धांतिक रूप देखि अझै पनि संभव छ र तपाईंलाई शब्द स्वीकृति ऋण संग परिचित हुनु पर्छ। बैंकले विनिमयको बिल र छुट्याइएको रकमको छुटकारा छुट्टै छोटो बचत गर्दछ, यो रकम एक क्रेडिट सुरक्षामा।
अघिल्लो लेखपरिशोधन अवधि